भारतमा पनि भेटियो ओमिक्रोंन : नेपालमा खतराको घन्टी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
भारतमा पनि भेटियो ओमिक्रोंन : नेपालमा खतराको घन्टी !
कोरोना भाइरसको नया भेरियन्ट छिमेकी देश भारतमा पनि पुष्टि भएको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घन्टाभित्रै दुई जनामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताए अनुसार ६६ वर्षीय र ४६ वर्षीय दुई जना व्यक्तिहरुमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फेला परेको हो। दुवै संक्रमित कर्नाटकमा फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ले बताए ।
दक्षिण अफ्रिकामा सुरु भएको यो भाइरस ओमिक्रोन भेरियन्ट २९ वटा देशमा फैलिसकेको छ। यो सामान्य कोरोनाभन्दा पाँच गुणा बढी खतरनाक रहेको बताइएको छ। यता नेपालमा पनि नया भेरियन्ट भित्रिन सक्ने सम्भावना लाइ मध्य नजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएका अफ्रिकी मुलुक सहित नौ देशबाट आउने यात्रु लाइ नेपाल प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यहीँ मङ्सिर १३ गतेको बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो ।
ओमिक्रोंन को भेरियन्ट भारतमा देखापरे सगै नेपालमा पनि खतराको घन्टी बजिसकेको छ । खुला सिमा ,प्रभाबकारी सीमामा परिक्षण नहुनु लगायत ले पनि फेरी बिस्तारै उठेको नेपालले बढिने ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा यसको असर बैदेशिक रोजगारमा पर्ने देखिन्छ । लामो समय देखि ठप्प बैदेशिक रोजगारी पुन धरापमा पर्ने देखिन्छ । बिस्तारै ताग्रिदै गरेको बैदेशिक रोजगारमा पुन देखिएको कोरोनाको नया भेरियन्ट ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने होकी भन्ने चिन्ता थपेको छ ।
अहिले पनि हजारौ युवा बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि प्रोसेस गरिरहेका छन् । कोरोनाको नया भेरियन्टले विदेश जानेलाई मात्र होइन बैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किने नेपाली पनि प्रभावित हुन् सक्ने यस भन्दा अगाडिको घटना ले देखाइसकेको छ ।
पूर्ण खोप लगाएका ब्याक्ति मा पनि ओमिक्रोन देखिएपछी फेरी उठ्दै गरेको बिस्व फेरी एकपटक कोरोनाको चपेटोमा लपेटिने डर बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालि युवाले धेरै समस्या भोगिसकेका छन् ।
फेरी लक डाउन को अबस्था आयो भने बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपाली ले फेरी क्वारे’न्टाइन को नाममा अनाबश्यक शुल्क त् कहिले फ्लाइट चार्ट’र्डको नाममा सामान्य समयमा भन्दा चार गुणा हवाई टिकट मा खर्चिनु पर्ने हुन सक्छ ।
नेपाल मा अहिले सम्म यो भेरिएन्ट पुस्टि नभएपनि कमजोर स्वास्थ्य नीति र बिम्मंस्थालाको कमजोर ब्यबस्थापन ले गर्दा एक दुइ दिनमै देखिने पक्का छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा यथेस्ट ध्यान दिनु जरुरि छ ।